Waa maxay sababta aan guursaday Sidaas Young: From My Wife's Perspective — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
About bil ka hor ayaan qoray blog a sheegaya waawayn sababta aan u guursaday si dhallinyarada ah. Waxaan si qoto dheer lagu dhiiri by jawaabaha ka yaa akhriyey oo dhan oo baryadayda ayaa in Rabbigu ku caawin lahaa na in ay ka fekeraan in ka badan kitaabku ku saabsan guurka. Haddii aad aan helin in uu akhriyo in post asalka aad iska baarto halkan: Waa maxay sababta aan ma Hel Xaas Sidaas Young?
Well ka dib folks badan oo soo taagay aniga iyo ii sheegay sida waxtar leh waxa ay ahayd iyaga, waayo,, Waxaan u maleeyay in waxa uu noqon lahaa sidii waxtar leh inay naagtaydii ha, Jessica, su'aasha uga jawaabo isku mid ah ka eego. Sidaas halkan waa. Maxaa ka dhigay xaaskeyga go'aansato in aad is guursaday si dhallinyarada ah? Waxay sheegtay ...
1. Waxaan ka helay nin cibaado leh
Markii ugu horeysay ee aan la kulmay Trip, Waxaan ahaa ma qorsheynayo on guursado waqti dhow. Laakiin ka markii ugu horeysay aan u soo baxay, Waan ogaa waxaa jiray wax ka duwan isaga ku saabsan. Waxa uu ahaa dareen ku saabsan Injiil hab aan marnaba arkin tan ka hor nin aan da '. Waxa kale oo aan la kulmay marna qof oo kale aragti caqli on shukaansi. Thanks inuu xer ka hor college uu si sax ah ogaa waxa uu u maleeyay xiriir cibaado leh waa u eg oo uusan diyaar u dhimayaan in.
Waxaan galin in aan arrintan ku dhibtooday markii hore. Waxa ay u muuqatay mid halis ah oo xad-dhaaf ah. Laakiin muddo ka dib Eebaha wuxuu bilaabay inuu xigmadda in xiriir cokan leh bulshada i tusi, khayroon daahirnimo galmada IYO dareen, iyo shukaansi ujeedada guurka. Haddii aad diyaar ma tahay in la guursaday, ka dibna ay u badan tahay in aan fikrad fiican si ay u galaan kasta dadka kale Quluubtooda. In Song of Solomon waxa aanu ka digay in aan jacayl toosin ay wakhti ka hor. Sida haweenka, Annagu waxaannu nahay dadkuba aad u qiiro leh oo si markii aan la kulmay nin oo ahaa dareen ku saabsan qabashada xiriirka noo jidka ah in ilaaliyaan lahaa qalbigayga, Waan ogaa waxaan helay goolhayaha a :)
2. Waxaan dhiirigelinayaa by dadka nolosheena
Inta lagu jiro our saaxibo waxaan weydiiyey dadka qaar la dambaysta la lug leh our xiriir. Waxay noo sii lahaa xisaabtamaan xuduudaha iyo aad nooga caawiso go'aamo xigmad leh oo ku saabsan naga xiriir. Waxaan sidoo kale dhex maray talinta guur ka hor ka hor inta aan xitaa helay hawlan. Labadan waxyaalood ogol noo inay xigmadda ka weyn doondoonaan, walaalaha ka xigmad iyo gabdhaha ku saabsan in ay ahayd fikrad fiican ah in aad is guursanaayo. Ilaah wuxuu ina siiyey wadaadada iyo hanuunin bixiya ka our kaniisadda maxalliga ah sabab ah. Waxay kaa caawin noo qabaa iyada oo go'aamada our si caqli ah oo ku siin a aragti ka baxsan cibaado leh. Relationships la sameeyay in go'doon yihiin gelinaya lamaane halis khatar ah dembiga iyo go'aan qaadashada u soconina. Xaqiiqdii waan ku dhiiri lahaa lamaane shukaansi u leedahay in rumaystayaasha kale ee ka bulshadaada in kaalin uga qaatay xiriirkooda.
3. Rabbigu wuxuu i tusay quruxda guurka
Sida Freshman ah ee kulliyadda waxaan lahaa waxa aan jeclahay in aan soo wac Superwoman Syndrome. Waxaan ahaa mid aad u madax banaan oo mustaqbalkiisa kala eryay, aad u soo horjeeda in ay fikrad ah ee u baahan nin. Uma maleynayo ay jiraan wax qalad ah in la noqdo madax banaan ama xirfadiisa kexeeyey, laakiin qalbigayga waxaa ka badan in uu ahaa. Waxaan la fududaysanaya design Ilaah ragga iyo dumarka. Waxaan jeclaan lahaa in aan waligood sheegay in cod dheer, laakiin haddii aan ahaa qof daacad ah, Waxaan ahaa niyad waxa aan u maleeyey in Kitaabka Quduuska ah lahaa in la yidhaahdo oo ku saabsan haweenka. Waxaan nahay oo taharyar junuud, waxaan ma bari karaan, waxaan ma waxay keeni kartaa, innagu ma nihin kuwa madaxa reerka, oo aan jeclaa aad u, Annagu waxaannu nahay in ay ruuxa qabow oo aamusan. Waxaan u maleeyay inaan haystay wax Laakiinse qalbi qabow oo aamusan oo ma aanan xiiseyneynin in la beddelo aan shakhsiyadda. All of fikradahaan igu soo hoggaamiyey ka fikirin in guurka ahaa wax dib ayaa i soo qaban lahaa. Waxaa iga dhawrtid ka daba dhan riyooyin mustaqbalkiisa waxaan lahaa iyo maalin maalmaha ka mid I soo gabagabeyn doonto la 10 iyo dhallaanka qeybtii on beer meel.
Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, sanadihii la soo dhaafay, Rabbiga ayaa i baray oo waxay i tustay waxa ay dhab ahaantii u egtahay in ay qof dumar ah oo cibaado leh. In qof dumar ah oo cibaado leh waa aan lagu qeexay maxaad ama ma sameyn karno aad. Waan ogahay badan oo dumarka cibaado leh, kuwaas oo si daacad ah u adeegtaan Rabbiga ee shaqo shirkadaha iyo haween aan tiro kuwaas oo u adeega carruurta iyo nimankooda daacad ah guriga. dawgeeda kitaabiga ahi wuxuu ku saabsan yahay fahamka doorka gaarka ah ee Ilaah inoo ah sida haweenka iyo farxaa quruxda design ilaahyadii.
Sida qof dumar ah oo is qaba, waxaan bartay wax badan oo ku saabsan waxa ay ka dhigan tahay in ay haweenka cibaado leh oo aanan ka dareemi Xidhan hoos by ninkayga ama aan guurka. design Ilaah ee guurka waa wanaagsan iyo ammaanu. Oge rumaysnayn i siiyey kalsooni inay guursadaan da'da 22. Laba sano iyo bar ka dib, Ma wax qoomama ah, oo waan ku baryayaaye karaa oo kaliya in Rabbigu sii wadaan in ay ku barakeeyo guurkayaga.
Jdharden1 • August 19, 2013 at 7:53 waxaan ahay • Reply
Taasi waa mid cajiib ah, sidii Ilaah ku qori kartaa sheekada jacaylka ugu kaamil ah kuwa gacanta qalinka isaga u. Waad ku mahadsan tahay Jessica, runtii waxaan this loo baahan yahay. Tani waxay igu dhiiri sida jir ah 16yr in ay soo gudbiyaan si ay Ilaah oo aynu isaga jidkiisa noloshayda jacayl. Ilaah ha idiin barakeeyo.
Jannon Fitzpatrick • August 19, 2013 at 7:53 waxaan ahay • Reply
Waan jeclahay!! Waxaan nahay wadaadada dhalinyarada ka dhacay kaniisad yar oo waxaan mar walba sheegi dhalinyaro ah, “Waxaa jira waxyaabo laba kaliya aad waligaa samayn doonaa in xiriir… 1) guursato 2) burburi kor. Jebinta kor xanuun iyo abuuraa Alaabtoodii, sidaas haddii aadan diyaar u ah inay is guursaday, waxa fiican ma inuu ku soo bilowdo in xiriir.” (Ma aha in aadan u koraan in ay diyaar u guur xiriir noqon, laakiin waxaan inta badan hadlaya 13-16 da'doodu sanno.) Dadka intooda badan bilaabaan xiriir fekerayo waxa ay noqon doontaa mid yar, dhamaada, wax xiiso leh. Laakiin markaas dareenka horumariyaan, aad dembi galay, ka dibna waa mid dhib badan abid si aad u hesho baxay. Haddii aan ilaalin lahaa wadnaha ah Ilaaha na siiyey sida qaali ah, oo waxaad tagtaa at xiriirka ka dhinacaasi, aragtida waxaa ka mid ah ay gabagabadu in guurka nin cibaado leh ama naag, waxaan noqon lahaa kuwa waxyeelladayda fog ka yar iyo jebiyey markii in ninka Ilaah raalli ama naag Ilaah ayaa nagu wareegsan yimaado! Thanks for sharing!!!
Demonslayer4god777 • August 19, 2013 at 7:54 waxaan ahay • Reply
run ahaantii waan ku faraxsanahay riixi on link in ay aqriyaan this post Waxaan ahay. Aniga 25 oo aniga iyo ninkeeda waxaan la guursaday muddo ku dhow 5 sano. Hadda, Anigu waxaan ahay marka hore si qof walba leeyahay, Ilaah waa sababta aan u guursaday. Adiga oo kale, at 21, Waxaan la MA raadinaya mana Waxaan doonayaa inaan nin guursado, biqil Ma aanan rabin saaxiib. 2007 waxaa sanadkii la soo Ilaah si buuxda noloshayda bedelay. Bishii Janaayo aan kaliya ogaaday waxa Runtii Ilaah doonayay wuxuu ahaa xiriirka halkii diinta sidaasi darteed waxaan ahaa on sare(ruuxa) iyo qiiro sida wax aan abid soo mareen ka hor. wax Next waxaan ogahay bil ka dib waxaan la guursaday. Crazy waan ogahay. Laakiin waxa aan dhihi karo…Ilaah noo sheegeen in ay sameeyaan. Oo shan sano ka dib, waxaan wali wada jira, iyo wada kordhaya in Masiix. Hadda, Anigu ma aan kula talin lahaa qof kasta loo sameeyo sida si degdeg ah ku samaynay sidii aynu. Laakiin waxaan aan kula talin lahaa waa ka dhanka ah, Haddii aad dareento in hogaaminayo Ilaah, iyo baryootamay oo degdeg ah. Waxaan ilaahay ka baryaynaa in sii wadaan in ay koraan ma aha oo kaliya in aad guur laakiin waxaa la xoojiyo. Waxaan Ilaah ka baryayaa in jacaylkiinnu aad iyo is sidoo kale sii si ay u koraan. Waxaan qalbiga wax, anyperson, ruux kasta, in isku dayi lahaa inaan si aad u kala qaybiyaan. Waxaan Ilaah ka baryayaa in aad la barakaysan yihiin xirfadaha isgaarsiinta weyn, iyo samir kordhay. Ilaah waa idin sii karaa, in Ciise magaca.
Matt Novak • August 19, 2013 at 7:54 waxaan ahay • Reply
guys Thanks for isticmaalaya shukaansigaaga iyo guurka sida tusaale iyo dhiirigelin kali yar iyo lamaane is qaba oo dhallinyaro ah. Thanks waayo, Ilaah la guurkaaga ammaanaya, iyo xigmad, iyo waayo-aragnimada la jidhka Masiix la wadaago, taas oo dhab ahaantii aroosadda Masiix, si this sidoo kale na siinayaa sawirka ah sida roon ee aannu u dhaqmaan sida aroosadda Masiix. Ilaah shuqulkii uu sameeyey noloshooda si aad labadaba aad hagaagaan ee da 'yar ammaana.
Ariep17 • August 19, 2013 at 7:54 waxaan ahay • Reply
Wow, kanu wuxuu ahaa run ahaantii weyn! Sida 20 y.o. ppl bal i fiiriya sida waalan im waayo, waxaan jeclahay inaan guursado. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko qaar ka mid ah ballaarinta ku saabsan waxa aad ula jeeddaan u- “dareen saafi ah.” Waan jeclahay iyaku waxay sidoo kale in waxa aad sheegtay. Ilaah ha ku barakeeyo yall
Philipns2 5 11 • August 19, 2013 at 7:55 waxaan ahay • Reply
Asal ahaan, marka ayay tidhi “dareen saafi ah” ayay ka hadlayo oo badan oo ku saabsan ma durba maskaxdaada isku dayaya in ay guursadaan nin ama u malaynayso in aad tahay “si gaar ah” uu kaliya sababtoo ah aad shukaansi. Taasi waxay keeni kartaa fikrado kale dembi leh sida, “duni galmada, damaca,iwm” Waxaad ogaan kartid inaad tahay qof maskax ahaan Caa'isha marka aragtida ah qof qof kale in uu yahay mid si baynamutaan in aad xiriirka sanam karaahiya ah maskaxdaada u gaar ah. Taasi waa sababta Proverbs 4:23 waa sidaas oo kale muhiim ah in ay ku noolaadaan by,gaar ahaan qof dumar ah, maxaa yeelay, innagu waxaynu nahay, sida lagu sheegay, “dareenka” xayawaan.
Ariep17 • August 19, 2013 at 7:55 waxaan ahay • Reply
hadda waan ugu mahad naqayaa aad heshay. Your gabi ahaanba xaq u. Waxaan naftayda ku dhibtooday in. Taasi waxa kaliya oo ay keenaysaa in waxyeello loo baahnayn
Kerai halxidhkii • August 19, 2013 at 7:56 waxaan ahay • Reply
Sidee baan waxan u jeclahay!!!!!!!!! Mararka qaarkood waxaad u muuqdaan in ay iloobin in youre ma mid keliya, maxaa yeelay, aad u badan oo aad ku dhawaad ​​inta badan facooda u muuqdaan in ay u maleynayaa in aad “malahooda ku” dad badan oo la ii sheegay in aan diyaar iyo im aad u yar wasnt, laakiin i run ahaantii rumaysanahay in tani ay tahay waxa ilaah lahaa dukaanka ii. Waxaan ka cabsanayay ka mid ah maskaxdayda maalin ka dib, sababtoo ah ma aha oo kaliya ma i heli hore guursaday da'da 18 i sidoo kale guursatay nin i ogaa wax ka yar hal sano ah oo uu kaliya ahaa 19. Waxaan xiriir dagdag ah sida naftayada u socdeen in ay wada noqon, dheeraad ah oo haatan i isaga jecel badan i mar uun soo weriyo aan nolosha la wadaago nolosha oo wax laga beddelo i wouldnt wax. Waxaan wada tukaday oo wuxuu u tegey kaniisad wada helay xaas iyo cunug lahaa wada haatan halkan waxaan are..It noqon doonaa 3 sano ee febraayo oo i weli wax shalaay ah i udhaqaaqday this :-) ilaah ayaa i barakeeyey nin wanaagsan leh.. nidarradeedii My dunida macnaheedu aniga iyo i iyaga ku jejebin wouldnt.. Thanks for this dhajinta u sii i jeclaan dhalinyaro ah… Dhawa Waxaad abid arko lamaane ee la soo dhaafay til dhimasho laakiin i dadaalaan in ay noqon lamaane in til dhimasho aynaan qayb furiinka khiyaar ah ma aha!!
Adrienne Kelly • August 19, 2013 at 7:57 waxaan ahay • Reply
Ilaah ha idiin barakeeyo laba. Wuxuu hubaal maxaa yeelay, waxaad isaga iyo qorshaha u faaliyaan, lab / dheddig ah xiriirka isku halleeyey doonaa oo wuxuu galay heshiis axdiga oo aad waynaysaan lahaa iyo mid kasta oo kale ee nolosha. Waanku faraxsanahay.
M.A.R.V. • August 19, 2013 at 7:57 waxaan ahay • Reply
waxaa Jeceshahay!! Ay yall waa Naag-up a aragti ah oo ku saabsan dawgeeda kitaabiga ah iyo wifes oo dhan yeela :)
Louib2001 • August 19, 2013 at 7:57 waxaan ahay • Reply
Iwantstate01 • August 19, 2013 at 7:58 waxaan ahay • Reply
Jessica, aad la wadaagi kartaa qaar ka mid ah wax ku ool ah Trip ma inta aad saaxibo ah inay ilaaliyaan MASKAXDA qalbigaaga. Waxaan fahamsanahay dejinta xuduudaha khayroon daahirnimo jirka. Laakiin maxaad u eg ficil ahaan aagga dareen?
Purposedrivenjc • August 19, 2013 at 7:58 waxaan ahay • Reply
iga siiyey aragti cusub ee guurka, rucubood mahad
Kory Hagler • August 19, 2013 at 7:58 waxaan ahay • Reply
Qalbigaygu wuxuu la dhab ah lagu dhiirigelinayaa, gabi ahaanba u qurux badan
Robert Rivera • August 19, 2013 at 7:59 waxaan ahay • Reply
Beautiful!! Ilaah ha idiin barakeeyo guys!! Aad yididiilo…
Punchyko • August 19, 2013 at 7:59 waxaan ahay • Reply
wow!!! walax wanaagsan, mahad aad u badan, waayo, dhajinta blog this! Grace&nabad 0 =)
Katherine2c • August 19, 2013 at 7:59 waxaan ahay • Reply
Waxaan si loo baahan yahay in this akhri!!! Mahadsanid!! Waxaan la waxyaabaha aad mar la dagaallamay halgan iyo waxaan doonayaa in aan sharaf ah Sayidka iyo ninkayga!!!! Iyadoo in lagu sheegay, Waxaan sii wadi doonaa in ay ku dadaalaan in ay xaaskiisa P31 noqon!!! Mahadsanid!!!
Paul WenChih Anibal • August 19, 2013 at 7:59 waxaan ahay • Reply
Wax kasta oo ku kacaya samaynayaan waa qiimo fiican la Wadaage hammiga samaynaya. … si aan u qoro: http://mentoringmarriages.word…
Waad ku mahadsan tahay in aad article.
ChosenV • August 19, 2013 at 8:00 waxaan ahay • Reply
runtii waxaan Ilaah ugu mahad naqayaa, waayo, aad blog. Ka dib waa uu akhrinayey markii ugu 1aad lay wow'd shaqada Ilaah. Saddex bilood ka hoos line aan ku akhriyey mar kale iyo waxaan weli ahay wow'd. Waxaan ahay a 22 sano jir dumar ah oo la marraige “tacaalaan”, aad blog waa trully adkaa. Waxaa jiraan ayaan tukashadayda waa in aan Aadanahu ahaan doonaa sida Ilaah oo kala eryay sida Trip ahayd marka la eego fulinta doorkiisa nin ee naga xiriir. Ilaah ha idin barakeeyo,:-)
Chelster • August 19, 2013 at 8:00 waxaan ahay • Reply
At Man Up, THE, bilood ka hor labo, Jess xusan Trip waa iyada “daboolaya,” iyo halkan ayay ka hadlay sida ay u noqon a isticmaalo “superwoman,” laakiin yimid si ay u bartaan waxa cibaado leh (Muslimiinta) femininity waxaa u malaynayeen in ay eegaan sida.
midkood ama karaa labadiinaba aad wax yar ka badan si gaar ah oo ku saabsan waxa aad aaminsan tahay fikrad Ilaah waa doorka ragga iyo dumarka ee guurka la hadasho? Y'all waa barako!!
Nicole Rose Munhawa • August 19, 2013 at 8:00 waxaan ahay • Reply
runtii waxaan qabaa sheekadaada waa ku yaab. Labada idinka mid ah oo Tumeeya quruxda hadiyadda ah guurka iyo aad runtii I waxyoonay. Hambalyo guurka iyo waan ku baryayaaye jacaylka foosha xun in la wadaago u dhexeeya aad. Sidaas faraxsan idiin
Kayla_brown_1 • August 19, 2013 at 8:00 waxaan ahay • Reply
sababta iyocadhadii i heli in :(
Godgiven51 • August 19, 2013 at 8:01 waxaan ahay • Reply
Kaasi aragti caqli leh,aniga iyo xaaskeyga waan u soo guursatay for 5 sano oo aan u hip hop beerta Injiilka,ay had iyo jeer laga cabsado in ay iyada leedahay in aan geeska tukanayay markii aannu u safraan,aad naagood ka ciyaaraan qayb muhiim ah nolosheena,sii samaynayaan wixii ya doin SIS!
Iolene_Branch • August 19, 2013 at 8:01 waxaan ahay • Reply
Aniga qudhaydu waxaan saaray safarka uu ku noqon karo qof dumar ah oo wanaagsan Masiixa bilowga 2011 oo waa waxaan idinku leeyahay waxaan u imid a siyaabo aad u fog oo waxaan ku faanayaa aad u keligay ahay. Intii aan safarka Ilaah kaalinta nin la Barakeeyey in aan jid iyo reading this blog ayaa hubaal ay qeyb ka ciyaaray sidii calaamad ugu danbeysay ee loo baahan yahay ka baryadayda.
Waxa kale oo aan lahayn niyad of raadinaya nin ku qaataan inta kale ee aan nolosha la at 20 sano jir ah, laakiin halkan waxaan ahay, iyo blog this waa mid aad u dhiirri gelinaya. Aniga ahaan inay isaga ag istaagayaa dayada oo dhan iyo naag ah Ilaaha i abuuray in uu noqdo oo noqon by kooxdiisa sidii Ilaah ku shubay isaga u noqon ninkii uu u baahan yahay in uu noqdo.
Waad ku mahadsan tahay this. Xaqiiqdii waan samayn maqsuud :)
Arnold Mofor • August 19, 2013 at 8:01 waxaan ahay • Reply
Whao, Trip iyo Jessica! Waxaad dhab ahaan ma garanayo inta casharada aad ay gaarto-Waxaan ahay in Cameroon. Aniga 25 sanno jir ah oo dhawaan qaatay maalin oo wakhtiga loo dheereeyey la Ilaah inuu doondoono Ilaaha ah oo ku saabsan mustaqbalka aan nolosha la wadaago. Markaasaan u yimid oo leh dhibcood liiska / salaadda liiska nooca naag Waxaan doonayaa in aan taariikhda iyo ugu danbeyn guursado. Haddaba maalintaas ka dib waxaan la kulmay aad blog. Waxaan qabaa Ilaah waa i diyaarinaya in hab gaar ah. Tani waa Liiska dhibcood / salaadda liiska naagtayda:
Arnold EE LIISKA xaaskiisa / POINTS SALAADDA LIISKA
Oo gooni loo sooco oo sii kordhaya Christian
My Gargaare haboon
Ixtiraamaya waalidkeed, qoyskeeda, awooda iyo i aan idinla joogay oo oo maqan
Partners oo ila jooga ii wasaarada
Muslimiinta in wax walba oo
Miyuu Ruuxa qabow oo aamusan
Saamiyada fikrado la mid ah, halganka, xanuun, ma qarsoon
Ma dooni quruxda dibadda-dharka, dahabka, Hababka timaha
Dulbadan iyo Sharafbadanyahay
Ka dhigaysa i dooni inay ka shaqeeyaan mid aad u adag
Angela Johnson • August 19, 2013 at 8:01 waxaan ahay • Reply
Maxaa a Blessing Waxaad Labada tahay! Ka dhig On ILAALI On isaga la! Waxaad tegi maayo Wrong…..Ever! Waan guursaday oo yaryar laakiin xigmadda isaga iyo qaar kale oo ka mid ah kuwaas oo uu hogaaminayo Ruuxa The aan si na dhiiri in marka hore isaga doondoona……waa inaan sheegaa in qof kasta oo aad doorato, jidkiisa iyaga Positioning doonaa naftooda si ay u helaan Plan HIS iyaga iyo ma qorshe ay naftooda taas oo Far Greater badan Wax aan abid waayeen “fekeraan” waayo, qudheenna….Isaga uun tala saarta!:) Anigu waxaan ag marayay Faith iyo ma by Sight (2 Corinthians 5:7) Ama waxaan ka Dilay lahaa is……Isaga la'aantiis waxaan arkay wax wanaagsan. Waxaad ku mahadsan tahay Rabbiga Waayo diritaanka Ruuxa Quduuska ah ayaa u tacsiyeeya kuwa I Hanuunin. Ciise waa Rabbi! ( Waxaan weli ku guursaday, waxaana Labada <3 Rabbigu wuxuu!) joog barakaysan!:) Inta badan <3 iyo Peace!:) Aad Ilhaaminta labadiinaba aad in ay posted, Aad ayaad u mahadsantahay!:)
aneetarh • August 19, 2013 at 8:03 waxaan ahay • Reply
u mahad aad u badan Jessica,Dis waa dhab garan i baahan tahay WG xaq u. Ilaah rilly BLS u guys. Waxaan ahay 21, ee relatnshp cibaado n saaxiibkay na doonayo 2 aad ugu dhaqso badan guursaday. Ma aanan hubin haddii ay fikrad Gud sabab i dareemay i lama qaan enuf BT i mahad Ilaah 4 Dis,haddii ay doonista Ilaah den i gebi subscribe 2 waxaa
Rchllnndreher • August 19, 2013 at 8:03 waxaan ahay • Reply
WOW sababaha ka dambeeya in aad qaadan marride waa isku mid sida anigaa iska ahaayeen iyo waxa weli i rumaysan, waxaan qaatay go'aan sax ah, waxaan sidoo kale dareemay Ilaah ku yidhi tani waa mid ka mid ah waa wakhtigii la iska dhaafay oo kaliya naga wadaad ansixin didnt taas oo ka dhigtay doorasho adag hab kale oo aan ahayn waxaa Ilaah soo socda. waxaan ahay 22 oo kaliya guursaday 2 mo ka hor. Waxaa laga yaabaa in waqti gaaban, laakiin Ilaah waa na soo wada kordhaya iyo ina baraysaa aad u badan(ii sida in ay kor u furi ahaan jilicsan oo u noqon qof dumar ah sida Ilaah i abuuray in ay) Waxay ahayd awsome in this akhriyey, waxaana doonayaa inaan ku mahadsantahay waqtiga si aad u qori. Ilaah Adiga iyo reerkiisii ​​u duceeyo aawadeed karaa!
Rachel Wright • August 19, 2013 at 8:03 waxaan ahay • Reply
maragga Ya'll waa sidaas laga cabsado! Waxaa la dhiirri inaan maqlo in ya'll ay awoodaan in ay guursadaan oo dhallinyaro ah. Aniga qudhaydu waxaan ahay is guursan xagaaga at da'da 21 oo Ilaah ayaa na barakeeyey siyaabo badan oo oo ku sii socda si ay noo yaabiyo oo na barakee! aad mar kale ku mahadsan tahay ka labadiinaba aad Waayo, kuwaas oo blogs halmaaami!
Dfletcher812 • August 19, 2013 at 8:03 waxaan ahay • Reply
Waxaan Dhulku heshii. Waxaan guursaday da'da 18. Haa, waxaan ahaa ilmo laakiin, Rabbigu ila hadlay oo igu iyo ii sheegay baqin in ay qaataan orgida ka mid ah iimaanka iyo addeecitaanka doonista Ilaah i sameeyey. Haddaba Im 24 iyadoo Saddex Kids iyo ninkayga iyo aad ayaan ugu qoto dheer ee wasaaradda music yihiin. Ilaah sameeyey qaar ka mid ah wax aan macquul aheyn in nolosheena oo aan jeclahay inaan maqlo in raggii dhallinyarada ahaa oo Ilaah dumarka kale ee yar yar oo ay ogaadaan in Ilaah siiyey ay yihiin ee naf iyaga iyo deiced si ay u sameeyaan go'aanka saxda ah.
Oo waxaan illoobi iyocadhadii, Mary guursaday Joseph at 14 sano jir iyo Ciise Birthed, Waxay ahayd gabadh bikrad ah oo saafi ah in Ilaah hortiisa. Sidaas Mudanayaal iyo rag joogo saafi ah, waayo, Ilaah ilaa u guursado!!!
Grabiel Rivera • August 19, 2013 at 8:04 waxaan ahay • Reply
Taas macneheedu weyn la mid ah ayaa igu dhacay iyo xaaskeyga in ay , i ahayd 21 oo iyana waxay ahayd 18. waxaan Ilaah yuusan nala toosiyo oo noqon in annagoo guurka iyo haatan waxa uu inoo muujinaya shuqulkiisa innoogu iyo in our guurka. Waxaa laga yaabaa in ilaah sii barako Rabbigu guurka sida uu sameeyey in ilaah annagaa ku barakeeyo
Addis Hunter • August 19, 2013 at 8:04 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay maragga, Waxaan la xidhiidhi karaa in aad siyaabo badan. Waxaan u leeyihiin in ay u galiyo in aan maalin kasta la dhibtoon “isagoo ah ruuxa qabow oo xasilloon” qayb ka mid ah aad marrige..Like, Waxaan ahaa oo weli ahay mid aad u kexeeyey oo independant , iyo ninkayga aqoonsaday sida madaxa qoyska iyo gudbinta fikradaha uu (xitaa markii aan siinin heshiin) waa dhibaatada ugu weyn sidii naag dhalinyaro ah. maalin kasta waxaan ku weydiin Ilaah si ay u caawiyaan i naftayda oo khushuucsan oo submitt ninkaygii si kasta. Waad ku mahadsan tahay la wadaago.
CY Hudson • August 19, 2013 at 8:04 waxaan ahay • Reply
Waxaad guys yihiin sida barako cajiib ah Mu'miniinta dhalinyaro ah! Waan jeclahay labadan blogs oo Rabbiga ku mahad naqaan, waayo, isagu ayaa ila hadlay laba idinka oo dhan!
Jennifer Ann Iibiyaha • August 19, 2013 at 8:05 waxaan ahay • Reply
21 sano jir ah, waxaana dareemayaa in aad ii tilmaamay. Waxaan si xaqiiqo ah u leeyihiin in Superwoman Syndrome. Waad ku mahadsan tahay wax badan aad marag u Waxyoon, waxay i siinaysaa rajo :)
Orinthea McKenzie • August 19, 2013 at 8:05 waxaan ahay • Reply
Waxaan ahay dhab ahaantii lagu dhiiri by marag this. Ilaah ha u union
Pulemolise • August 19, 2013 at 8:05 waxaan ahay • Reply
thnx Trip unahay iyo Jessica,dad badan oo waaweyn nid 2 arki Dis,i m dhab ah lagu dhiirigelinayaa by aad guys,Waxaan HW murtida dhinac ur dhameystiraan,-Safarka ka hor timid naag cibaado leh iyo Jessica kulmay nin cibaado leh,wow!(DATs sababta u lahaa 2 is guursaday,lol!) nd aan thnk Ilaah 4 guys u,u HV muujiyay DAT u b karo dadka waaweyn masuulka ah ee dhallinyaro ah dadka waaweyn ee da'da wen ugu da'da weyn iyocadhadii evn maamuli jajab ah wat u R samaynaya,weyn-ups 2 in,nd Ilaah ku sii waxaa laga yaabaa in 2 kudradaha ur guurka iyo aad u badan oo leh maalin kasta yimaado DT
Golaha Ewansiha • August 19, 2013 at 8:06 waxaan ahay • Reply
this helay aan fikirka ku saabsan badan
Simoon paul ----- uk • November 9, 2013 at 5:55 pm • Reply
u mahadsan tahay wax badan Jessica for dhiiri sida apowerful .Am 21 laakiin i alwalys u maleeyay in hab sii kordhaya diiradda on xiriir .Sorry in aad dhibaato, Ma shukaansi qof xiriir Christian meanyou leeyihiin inay guursadaan qofka in aad u , in kastoo ay ayaa Shukaansiga oo dhan ur raadinaya for..n aad siinin person..cos waxyeello doonayaa ayay filaysaa uto iyada hubby …Sidee u qaban lahaa masiibo noocan oo kale ah?????thxx.
Waxaan ognahay in ay tani la qoray ka hor ku nasta iyo ugu dambeyntii waxaan helay fursad si ay u akhriyaan. Laakiin, Waxaan u maleynayaa in tani ay ahayd waqti fiican ii si ay u akhriyaan. Muuqdaa sida Ilaah oo xajiya waxyaalaha yar agagaarka ii sheego waxa la joogaa wakhtigii inuu dib shubaa waxyaalo. Oo waxaan qabaa xiriirka aan ma aha oo kaliya la saaxiibkay waa waxa ay isaga u baahan yahay dib u ah ee, laakiin tani waxay muujinaysaa in uu kaa caawin karaa waxyaabo siman.
Sidoo kale waxaan helay xiiso leh in aan marna ku fakarin aan arinkii sida Superwomen Syndrome ah, laakiin xaqiiqdii waxaan dhihi karaa kartaa waan caawin ka shaqeeya miinada u baahan tahay. Taasi waa sida saaxiibkay ii qeexayaa marka aan isku dayo inaan waqti badan ku qaadato in ay caadifad ahaan ama shaqeeyaan kuwa caqliga leh.
Hey Trip! labada blogs, kuwaas oo aan akhriyey, oo waxay (oo ay la socdaan talada cibaado leh ee qoyska iyo saaxiibada) ayaa si weyn waxtar ii in dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. Waxaan la kulmay gabar aan Ilaah aqoon ayaa ii guursado, oo waxaan sugaya kaliya uu waqtiga. Waa arrin suurtagal ah in aan soo afjaro doonaa xaas xitaa ka hor inta aad ahaayeen, ama ugu yaraan ka dibna!
Maxaa talo ku siin lahaa in qof si kale kasta oo diyaar u ah inay guursadaan, marka laga reebo awood u leh inay siiyaan guri (sababta oo ah jaamacad dhigata)?
Nadene • Laga yaabaa 24, 2014 at 5:38 pm • Reply
Tani waxa ay ahayd qurux badan. ma muujin karaa inta aan this loo baahan yahay :'). Ilaah waa run ahaantii aamin!
Thanks Jessica in uu ahaa Ilaah run Waxaan u lahaa in la maqlo!
Thanks for wadaago Jessica. this ayaa hubaal view bedelay on shukaansi; in aan jacayl toosin ay wakhti ka hor. daroogada!
Lily • June 11, 2017 at 12:47 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay wadaaga aad waayo-aragnimo iyo xigmad ku saabsan mowduuca. Reading this ayaa in ka badan waxaad ogaan i caawisay.